AVI faịlụ ndị nkịtị faịlụ na i kwesịrị ahụwo ma ọ bụ nwere ya na kọmputa gị. Nke a Audio Video Interleaved (AVI) bụ a multimedia akpa format na mejupụtara nke ma ọdịyo na video data faịlụ. Microsoft mepụtara ụdị faịlụ Ọkpụkpọ dị ka a constituent nke Video n'ihi na windo sistemụ. The AVI faịlụ forma bụghị naanị na ọ ka ị strimụ videos na audios online kamakwa synchronous audios na video playback. Ọzọkwa ọ na-enyere ị na-egwu ọkọlọtọ definition vidiyo na kọmputa gị. Otu ihe atụmatụ banyere nke a akpa format bụ na ọ nwere ike igwu DVD video usoro. AVI video format bụ dakọtara na VLC Media Player, km ọkpụkpọ nakwa dị ka MPlayer.
Part 1: Play .avi Videos na VLC media Player On Windows
Part 2: Play .avi Videos na VLC media Player On Mac
Inwe ụdị a faịlụ, olee otú ị na-egwu ya na gị na VLC? Were a obere tour na-eso ndị a. Ọ bụrụ na ị na-eji Windows arụ ọrụ usoro ahụ na-eme ihe ndị a.
1 Download VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ
VideoLan nzukọ emewo a ngwa dị online na ị nwere ike ibudata ya si VLC saịtị. Họrọ ndị ọhụrụ version na bụ dakọtara na kọmputa gị. N'ihi na nke a ikpe download a windows version na wụnye na PC gị.
2 Mepee AVI faịlụ na software
Na kọmputa m, họrọ .avi video format na ị chọrọ igwu mgbe ahụ nri pịa ya. A dobe ala ga-egosi na ya nri ma ọ bụ aka ekpe. Mgbe ahụ hover cursor na pịa Open na. Site n'ebe hover cursor na pịa na VLC ngosi site nhọrọ.
3 Play AVI faịlụ na VLC
Mgbe ị pịa Open na VLC, na video ga-akpaghị aka na-egwuri na VLC media. Site n'ebe ahụ i nwere ike ime ka ukpụhọde on olu, nchapụta akụkụ ruru na jirichaa ihuenyo na-enwe na-ekiri video.
N'ihi na Mac ọrụ ị nwere ike ka na-akpọ AVI faịlụ na VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ maka Mac. Nke a ọkpụkpọ bụ pụrụ ịdabere na ebe ọ bụ na ị nwere ike ijikwa gị playlist na-eme mgbanwe na olu na iche. Na-egwu ọ bụla .avi video faịlụ ị chọrọ ime na-esonụ.
1 Download VLC media ọkpụkpọ maka Mac.
Ndị mbụ na-eme bụ ibudata VLC media ọkpụkpọ maka Mac na wụnye ya n'ụzọ ziri ezi na kọmputa gị. A ngwa bụ ngwa ngwa dị online.
2 Mepee chọrọ faịlụ na ngwa
Mgbe nbudata mgbasa ozi ọkpụkpọ na-emeghe ya na kọmputa gị. Na isi menu click on File, a dobe ala menu ga-gbapụta. Site n'ebe ịnyagharịa cursor na pịa Open.
Ọ ga-eduzi gị na-ọnọdụ nke echekwara videos na faịlụ. Chọọ na pịa na avi video ị chọrọ igwu. I nwekwara ike ịdọrọ AVI video ka VLC na-egwu ya.
3-egwu AVI video
Ugbu a pịa Open mgbe ị na-ahọrọ AVI video. Nke a ga-akpaghị aka-egwu video na VLC media ọkpụkpọ.
Mgbe ụfọdụ ndị AVI faịlụ nwere ike na-na na na VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ i obi ụtọ ebudatara. Unu ga-esi annoyed ebe Wondershare Video Converter Ultimate ga-akpọ ya.
Nke a ngwa bụ ihe kasị mma ọzọ nke VLC ebe ọ na-akwado ọtụtụ faịlụ formats gụnyere AVI faịlụ. Download ya adịghị na-ekwu.
> Resource> VLC> Olee otú iji Play .avi Videos na VLC media Player?